मुटुरोगका प्रमुख लक्षणहरू | 01 Articles | Nepal Heart Clinic Pvt. Ltd.
मुटुका धेरै रोगहरू छन् र प्रत्येक रोगको आफ्नै प्रकारका लक्षणहरू छन् । मुटुरोगका अनगिन्ति लक्षणहरूमध्ये मुख्यरूपमा सबैले थाहा पाई राख्नुपर्ने जम्मा १२ वटा प्रमुख लक्षणहरू छन् ।
१. छातीको बीच भागमा दुख्ने (Chest Pain)
मानसिक तनाव हुँदा वा शारीरिक परिश्रम गर्दा छातीको बीच भागमा दुखेर आयो भने मुटु दुखेको शंका गर्नुपर्दछ । यस्तो मुटुको दुखाई छातीमा ढुङ्गाले थिचेको जस्तो, डोरीले कसेको जस्तो, मुठ्ठीले निचोरे जस्तो वा आगोले पोलेको जस्तो प्रकृतिको हुन्छ । यो दुखाई बायाँ कुम, पाखुरा, घाँटी, चिउँडो आदि तर्फ सर्न सक्दछ । यो दुखाई आराम गरे पछि ठीक भएर जान्छ । मानसिक तनावको अवस्था र शारीरिक परिश्रम (हिंड्दा, उकालो चढ्दा, भारी उठाउँदा आदि) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको यो छातीको पीडालाई एञ्जाइना भनिन्छ । यो मुटुका रक्तनलीहरू साँगुरिएको अवस्थामा उत्पन्न हुने लक्षण हो । रक्तनलीभित्र कोलेस्टेरोल जमेर साँगुरो भएमा परिश्रम गर्दा मुटुका मांसपेशीहरूलाई आवश्यक पर्ने ग्लुकोज र अक्सिजनको आपूर्तिमा कमि हुन जान्छ जस कारण मुटुको पीडा उत्पन्न हुन्छ, जुन सबैभन्दा पहिला छातीको बीच भागमा अनुभव हुन्छ र बिस्तारै वरिपरि फैलिदै जान्छ । छातीमा हुने यो पीडा मुटुरोगको एक अति महत्वपूर्ण लक्षण हो । शारीरिक परिश्रम वा मानसिक तनाव पछि उत्पन्न भएको छातीको दुखाई बेस्सरी बढ्दै गयो, आराम गर्दा पनि यो ठीक भएन, चिट्चिट पसिना आयो, वाक्वाकी लाग्यो र मृत्युको त्रास समेत उत्न भयो भने हृदयघातको शंका गर्नुपर्छ । हृदयघात हुँदा छातीको दुखाई एकदमै असैह्य हुन्छ । मुटुरोगका प्रमुख लक्षणहरूठ छातीका अन्य दायाँ बायाँ भागहरूमा उत्पन्न हुने, परिश्रम गर्दा हिँड्दा, दौडिँदा कम हुने, आराम गर्दा झन् दुखाई बढेको जस्तो लाग्ने, सियोले घोचेको जस्तो चिसिक्क हुने प्रकृति भएको छातीको दुखाई मुटुसँग सम्बन्धित होइन ।
२. दम बढ्ने (Dyspnoea)
धेरै जसो मानिसहरूले दम बढ्यो भने फोक्सो खराब भएको भनि सोच्दछन् । यो आंशिक रूपमा मात्र सत्य हो । दम खोकीको सम्बन्ध फोक्सोसँग मात्र नभई मुटुसँग पनि रहेको छ । यदि शारीरिक परिश्रम गर्दा दम बढ्छ र आराम गरे पछि यो कम भएर जान्छ भने यो मुटु रोगको लक्षण हुन सक्दछ । मुटु सुन्निएको, मुटुका मांशपेशीहरू कमजोर भएको, मुटुको भल्भ बिग्रिएको अवस्थाहरूमा यस्तो प्रकृतिको दम उत्पन्न हुन्छ । यसलाई हार्टफेल भएको भनिन्छ । परिश्रम गर्दा उत्पन्न हुने दम धेरै जसो अवस्थामा मुटुकै कमजोरीबाट हुन्छ । फोक्सोको रोगका कारण उत्पन्न हुने दम आराम गर्दा पनि कायमै रहन्छ, यस्तो दम, खोकीको साथमा हुन्छ, सास लिन भन्दा सास फाल्न कठिन हुन्छ, घाँटी सिट्ठी बजाए जस्तै गरि बज्छ । मुटु कमजोर हुँदा मानिस सास नपुगेर निसासिन्छ । मध्य रातमा झ्याल खोली सास फेर्न टाउको झ्याल बाहिर निकाल्छ । ओछ्यानमा पल्टिदा दम बढ्ने, अनि बस्दा वा उठ्दा दम घट्ने हुन्छ । यस प्रकार छाती र मुटुबाट उत्पन्न हुने दम रोगको प्रकृति बेग्ला बेग्लै छन् । दम बढ्यो भने फोक्सोको खराबी बाहेक मुटुको कमजोरी पनि हुन सक्छ भनि सोच्नु पर्दछ किनकी हार्ट फेल भएको प्रमुख लक्षण परिश्रम गर्दा दम बढ्ने हो ।
३. खुट्टाहरु सुन्निने (Pedal Oedema)
खुट्टाको घुँडा देखि कुर्कुच्चासम्म अगाडि पट्टीबाट रहेको लामो हड्डी माथि औलाले थिच्दा खोपिल्टा बस्यो भने खुट्टा सुन्निएको रहेछ भनि बुझ्नु पर्दछ । खुट्टाहरू सुन्निने लक्षण मुटुको रोग, मिर्गौलाको रोग, थाइरोइड ग्रन्थिको रोग, तथा अन्यड धेरै आवस्थाहरूमा देखिनसक्छ । मुटु कमजोर भएर राम्रोसँग पम्प गर्न सकेन भने खुट्टाहरू सुन्निने लक्षण देखा पर्दछ । साथमा दम पनि बढ्दछ र कलेजो पनि सुन्निन्छ । मिर्गौलाका रोगीहरूमा खुट्टाहरूका साथमा मुख र आँखाको वरिपरि पनि सुन्निने हुन्छ । तर मुटुका रोगीहरूमा भने पहिले खुट्टाहरू मात्र सुन्निन्छन् । खुट्टाहरू सुन्निने र परिश्रम गर्दा दम बढ्ने भएको छ भने सबै भन्दा पहिले मुटुको रोगको शंका गर्नु पर्दछ । यो हार्ट फेल (विशेषगरि मुटुको दायाँभागको कमजोरी) भएको लक्षण हो । छातीको दम खोकी रोग भएका रोगीहरूको खुट्टाहरू सुन्निने भयो भने दम खोकीले मुटुलाई असर पारेर हार्ट फेल गराएछ भनि बुझ्नु पर्छ । खुट्टाहरू सुन्निनु मुटु कमजोर भएको एक महत्वपूर्ण लक्षण हो ।
४. घाँटीको रक्तनलीहरु फुल्ने (JVP Raised)
घाँटीको बाहिर दायाँ वा बायाँ तर्फ रक्तनली फुलेको छ भने मुटु भित्रको चाप बढ्यो भनि बुझ्नुपर्दछ । मुटु कमजोर भएमा मुटु भित्रको चाप बढ्दछ । यस्तो अवस्थामा घाँटी बाहिरका नसाहरू राम्रोसँग फुलेको (सुन्निएको) देखिन्छन् । कुनै कुनै व्यक्तिहरूमा घाँटीको दायाँ वा बायाँको नसा मुटुको धड्कनसँगै उफ्रिएको देखिन्छ । यो पनि मुटु रोगको लक्षण हो । मुटुभित्रका ४ वटा भल्भहरू मध्ये ठूलो धमनीमा रहेको भल्भ (Aortic Valve) कमजोर भई पुरा बन्द नहुने भएको खण्डमा घाँटीको नसा उफ्रने लक्षण देखा पर्दछ । यस्ता व्यक्तिहरूको रक्तचाप पनि अनौठो प्रकृतिको हुन्छ – माथिको (सिस्टोलिक) धेरै र तलको (डाएस्टोलिक) थोरै हुन्छ जस्तैः– १८०/४० मिमि. । बाथ मुटुको रोग तथा अन्य कारणहरूबाट ठूलो धमनीको भल्भ खराब हुन सक्छ । घाँटीको बाहिरी भागमा नसा फुलेको वा उफ्रिएको देखिएमा मुटु रोगको शंका गरि तुरून्त परिक्षणका लागि डाक्टरकहाँ जानु पर्दछ ।
५. ओठ, जिब्रो, औलाका टुप्पा निलो हुने (Cyanosis)
स्वस्थ व्यक्तिको सम्पूर्ण शरीर रगत जस्तो रातो हुनु पर्दछ । रगतलाई रातो बनाई राख्ने काम अक्सीजनले गर्दछ । अक्सीजनले भरिएको रगत रातो हुन्छ । रगतमा अक्सीजन कम हुने वित्तिकै त्यो निलो हुन जान्छ । यदि औंलाका टुप्पाहरू, ओठ र जिब्रो निलो भयो भने रगतमा अक्सीजनको मात्रा कम भएछ भनि बुझ्नुपर्दछ । यसरी शरीरका विभिन्न भागहरू नीलो हुनु मुटु रोगको एक महत्वपूर्ण लक्षण हो । मुटुले नै रगतमा अक्सीजन भर्न रगतलाई फोक्सो तर्फ धकेल्ने काम गर्दछ । यदि मुटु कमजोर भयो भने फोक्सोमा रगत राम्रो सँग पुग्न पाउँदैन र रगतमा अक्सीजनको मात्रा घट्दछ । एक थरी जन्मजात मुटु रोगी बच्चाहरूमा पनि आँैलाका टुप्पाहरू, ओठ र जिब्रो निलो भएको देखिन्छ । मुटुभित्र प्वाल रहेछ, मुटुका रक्तनलीहरू उल्टा तवरले जोडिन पुगेका रहेछन् साथै मुटुको दायाँ भागको रगत बायाँ भागको रगतसँग सजिलै मिसिने अवस्था रहेछ भने यस्तो निलो हुने लक्षण देखिन्छ । बच्चाहरूमा यस्तो लक्षण देखा प¥यो भने जन्मजात मुटुको रोगको शंका गर्नुपर्छ ।
६. औंलाका टुप्पा बाक्ला र चाक्ला हुने (Clubbing)
स्वस्थ मानिसको औंलाका टुप्पाहरू चिटिक्क परेका थेप्चा हुन्छन् । नङ्गको जरा मासुभित्र राम्रो सँग पसेको र त्यहाँ जमेको हुन्छ । यदि औंलाका टुप्पाहरू बाक्ला र चाक्ला भए, नङ्गको जरा मासुबाट बाहिर निस्किएर छाला मुनि आएर बस्यो भने यो कुनै भित्री शारीरिक रोगका कारण भएको भनि बुझ्नु पर्दछ । जन्मजात मुटुको रोग तथा मुटुभित्रको भल्भमा इन्फेक्सन भयो भने यस्तो लक्षण देखा पर्न सक्छ । यस कारण औंलाका टुप्पा र नङ्गको बनावटमा परिवर्तन आयो, यो बाक्लो र चाक्लो भयो भने एक पल्ट मुटु रोग पो लाग्यो कि भनि शंका गर्नुपर्छ ।
७. टाउको दुख्ने , चक्कर लाग्ने (Headache, Dizziness)
रक्तचाप बढ्यो वा घट्यो भने टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने हुन सक्छ । रक्तचाप बढ्दा धेरै जसो अवस्थामा कुनै पनि लक्षण नदेखिन पनि सक्छ तर कहिले काहीं कसै कसैलाई रक्तचाप बढ्दा वा घट्दा टाउको दुख्ने वा चक्कर लाग्ने लक्षण देखा पर्दछ । मुटुको धडकन धेरै ढिला भयो भने पनि चक्कर लाग्ने हुन्छ । १ मिनेटमा ६० देखि १०० पल्ट धड्किनु पर्ने मुटु, प्रति मिनेट ४५ भन्दा कम पल्ट धड्किन पुग्यो भने चक्कर लाग्ने हुन्छ । मुटुको धड्कन अझ कम भएमा बेहोस हुने समेत हुन्छ । हार्टब्लक भएमा मुटुको धड्कन घट्दछ र चक्कर लाग्ने हुन्छ । यसकारण टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने जस्ता लक्षणहरू देखा परेमा रक्तचाप जचाँउनु पर्छ, ईसिजी परीक्षण गर्नु पर्छ ।
८. मुटुको धड्कन रोकिने वा छिट्टो चल्ने (Palpitation)
स्वस्थ मानिसले मुटुको धड्कन अनुभव गर्दैन । छाती भित्र हरपल मुटु चलेको मानिसलाई पत्तै हुँदैन । तर जब मुटुको धड्कनको गडबडी उत्पन्न हुन्छ तब मुटुको धड्कन बेला बखत रोकिएको वा छिटो छिटो चलेको अनुभव हुन थाल्दछ । कतिपय रोगीहरूले मुटु चल्दा चल्दै ढ्याक्क केहि बेर रोकिएको अनुभव गर्दछन् भने कतिपयले मुटु छिटो छिटो दौडिएको अनुभव गर्दछन् । यस्तो लक्षण देखा पर्यो भने मुटु रोगको शंका गरि तत्काल ईसिजी परीक्षण गराउनु पर्दछ ।
९. कफमा रगत देखा पर्ने (Haemoptysis)
क्षयरोग र क्यान्सर हुँदा मात्र होइन मुटुको रोगमा पनि कफमा रगत देखा पर्न सक्दछ । क्षयरोग हुँदा सुख्खा खोकि लाग्ने, छाती दुख्ने, मधुरो ज्वरो आउने, दुब्लाउने र कफ (खकार) मा रगत देखा पर्ने हुन सक्छ । यस्तै गरि फोक्सोकोज्ञज्ञ क्यान्सर रोग लागेमा पनि खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने र कफमा रगत देखा पर्ने हुन सक्छ । मुटुका कतिपय रोगहरूमा पनि खकारमा रगत देखा पर्ने हुन सक्छ । मुटुका भल्भका रोगहरू, मुटुको मांशपेशी कमजोर हुने र मुटु सुन्निने रोगहरू, हार्टफेल आदि विभिन्न अवस्थामा मुटुले राम्रो सँग पम्प गर्न नसकि फोक्सो भित्रका नसाहरूमा रक्तचाप बढ्न गई मसिना नसाहरू फुट्दछन् र रक्तश्राब हुन्छ । यो रगत कफ वा थुकमा मिसिएर मुखबाट बाहिर निस्किन्छ । यस कारण यदि कफमा रगत देखा प¥यो, एक्सरे गरेर हेर्दा टि.बी. वा क्यान्सर देखिएन भने मुटुको रोग पो हो कि भनि शंका गर्नु पर्दछ र मुटुको भिडियो एक्सरे गरेर हेर्नुपर्छ ।
१०. जोर्नीहरू दुख्ने, सुन्निने र ज्वरो आउने (Arthritis)
यो लक्षण बाथ ज्वरोको हो । शुरूमा घाँटी दुख्ने हुन्छ र त्यसपछि जोर्नीहरू दुख्ने, सुन्निने हुन्छ । साथमा ज्वरो पनि आउँछ । कसैकसैलाई घाँटी दुखेको थाहा हुँदैन, एकै पल्ट जोर्नी दुख्ने हुन्छ । स्कूल जाने उमेरका बाल बालिकाहरूलाई हात खुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने, सुन्निने (बाथ) भयो र यो बाथ, एउटा जोर्नीबाट अर्को जोर्नीमा सर्ने प्रकृतिको देखियो भने यो मुटुलाई विगार्न सक्ने रोगको अवस्था हो जसलाई बाथ ज्वरो भनिन्छ । बाथ ज्वरो लागेपछि मुटुका भल्भहरू बिग्रिन सक्छन् । बाल बालिकाहरूलाई बाथ भयो र साथमा ज्वरो पनि आयो भने डाक्टर कहाँ उपचार गराउनु पर्छ । यो मुटु रोगको लक्षण हो भनि शंका गर्नुपर्छ ।
११. हात, खुट्टा, ओठ आदि झट्का दिदै अनियन्त्रित रुपमा चल्ने (Chorea)
यो अनौठो लक्षण हो जसलाई ‘कोरिया’ भनिन्छ । बाथ मुटुको रोग भएकाहरूलाई रोगले मुटु बाहेक दिमागलाई पनि छोयो भने यस्तो लक्षण देखा पर्दछ । हात खुट्टाहरू मानिसले नाच्दाखेरी चलाए जस्तै झड्का दिएर आफै चल्छन् । ओठ र मुख पनि बटारिई रहन्छ । यो बिरामीको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहन्छ । यस कारण कुनै व्यक्ति (विशेष गरि बाल बालिका) ले अनायास हात, खुट्टा, औंलाहरू, मुख, ओठहरू, झड्का दिदै चलाई रहन्छ र यो चलाई उसको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ भने बाथ मुटुको रोगको लक्षण हो कि भनि शंका गर्नुपर्छ ।
१२. छातीमा हात राख्दा बिरालो कनेको जस्तो थर्केको महसुस हुने (Thrill)
स्वस्थ मानिसको छाती माथि हात राख्दा मुटुको धड्कन बाहेक अरू केहि अनुभव हुँदैन । यदि हातले छाती थर्केको अनुभव ग¥यो भने मुटु रोगको शंका गर्नु पर्दछ । मुटुभित्र प्वाल रहेछ, मुटुको कुनै भल्भ साँगुरो भएर रगत राम्रो सँग सञ्चालित हुन सकेको रहेनछ भने यस्तो थर्केको अनुभव हुन्छ । बिरालोको छातीमाथि हात राख्दा जसरी बिरालोको म्याउम्याउको जस्तो थर्कन हातमा अनुभव हुन्छ ठीक यस्तै प्रकृतिको थर्कनको अनुभव मानिसको छाती माथि पनि भयो भने मुटु रोगको शंका गर्नुपर्छ । यस्तो देखिएमा मुटुको भिडियो एक्सरे गरेर हेर्नुपर्छ ।